Vaovao - Fanontana fonosana miaraka amin'ny fitaovana fonosana isan-karazany
Kaontenera na fonosana, ary asa fanaingoana ny entana. Ny fonosana dia ny fitohizan'ny fizotry ny famokarana entam-barotra amin'ny fizotry ny fizaran-tany, ary izany dia fepetra tsy maintsy ilaina hidiran'ny entam-barotra amin'ny sehatry ny fivezivezena sy ny fanjifana. Ireto ny asan'ny fonosana: ①Manazatra ny sandan'ny entam-barotra sy mampiasa sanda, ary fomba iray hampiakarana ny sandan'ny entam-barotra; ② Arovy ny entam-barotra avy amin'ny antony voajanahary toy ny masoandro, rivotra, orana ary loto maloto. Fisorohana ny fatiantoka toy ny volatilization, leakage, mitsonika, fandotoana, fifandonana, famoretana, fatiantoka ary halatra; ③ Mitondra fanamorana ny fitehirizana, ny fitaterana, ny fanitsiana ary ny varotra mivezivezy, toy ny famoahana sy ny famoahana entana, ny lisitra, ny fametahana, ny fandefasana ary ny fandraisana, ny fivezivezena, ny fanisana ny varotra sns. ④ manatsara ny vokatra, manintona ny mpanjifa ary mampiroborobo ny varotra.
Ny fonosana dia manondro andiana hetsika mba hamolavolana sy hamokarana kaontenera na fonosana. Ny fonosana, amin'ny maha indostrian'ny serivisy ho an'ny toekarem-pirenena azy, dia nitombo hatrany ary nitombo niaraka tamin'ny fananganana sosialista sinoa. Indrindra fa hatramin'ny fanavaozana sy fisokafana, eo ambanin'ny rafitra toekarena eo amin'ny tsena sosialista, dia nandroso haingana ny indostrian'ny fonosana. , Fanontana, milina no singa lehibe indrindra, miaraka amin'ny haitao sy fitaovana maoderina sasany, ary rafitra indostrialy maoderina misy sokajy feno. Ny indostrian'ny fonosana ao Shina dia nandany 20 taona mahery, namita ny fampandrosoana ny firenena mandroso tao anatin'ny 40 taona lasa, ary nanova ny toe-javatra misy ny "vokatra ambaratonga voalohany, fonosana tahiry faharoa ary vidin'ny taha fahatelo". Ny indostrian'ny fonosana dia nivoatra avy amin'ny indostria miely sy mihemotra mankany amin'ny rafitra indostrialy feno misy fitaovana teknika maoderina sy fanasokajiana somary feno. Ny toetra mampiavaka ny fampandrosoana ny indostrian'ny fonosana ankehitriny dia ny fanatontoloana ny tsenan'ny fonosana, ny fanatontoloana ny fivoaran'ny indostrian'ny fonosana, ary ny fitomboan'ny fifandraisan-doha sy ny fiankinan-doha amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fonosana amin'ny firenena maro.
Mandeha mankamin'ny magazay kely, saika misy mahatakatra ny atao hoe fonosana. Na izany aza, raha vao miroso amin'ny famolavolana fonosana dia tsy azo ihodivirana fa ireo marika entam-barotra matetika manjelanjelatra, ny karazana fonosana isan-karazany ary ny "torohevitra" maika dia tsy afaka mifehy ny tsipika lehibe. Na dia nametraka fepetra fohy sy mazava momba ny famaritana ny fonosana aza ny firenena maro samihafa, toa an'i Etazonia: ny fonosana dia fiomanana amin'ny fandefasana sy fivarotana vokatra. Ho an'ny Fanjakana Mitambatra: ny fonosana dia fanomanana zavakanto, siantifika ary teknika amin'ny fitaterana sy fivarotana entana. Kanada dia mino fa ny fonosana dia fitaovana entina mandefa ny vokatra avy amin'ny mpamatsy ny mpanjifa na ny mpanjifa nefa mitazona ny vokatra am-pahasalamana tsara. ny fireneko dia namaritra hatramin'ny ela ny fonosana ho toy ny teny ankapobeny ho an'ny vokatra miaro ny vokatra mandritra ny fivezivezena, manamora ny fitehirizana sy ny fitaterana ary mampiroborobo ny varotra.